Taliska Booliiska Baydhabo oo Shacabka ka dalbaday in ay…
Taliyaha Saldhigga Booliiska Degmada Baydhabo oo xarun KMG ah u ah Dowlad Goboleedka KGS oo Warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in uu qiimeyn amni xaqiijin ah ku sameeyay xaafadaha Magaaladaas.
Korneel Muqdisho Ibraahim Axmed Taliyaha Booliiska Saldhigga Baydhabo ayaa sheegay in Shacabku ay waajib ku tahay sugidda amniga, la shaqeynta hay’adaha u xilsaaran iyo ku qadirinta xiliyada ay howlgalka wadaan.
Gaadiidka dadweynaha, kuwa gaarka loo leeyahay iyo Mootooyinka Bajaajka oo ay aad u adeegsadaan dadka ayuu sheegay in ay dan u tahay xasiloonida, maadaama saameynta ugu badan ay ku yeelaneyso.
Taliyaha Saldhigga Booliiska Magaalada Baydhabo Korneel Muqtaar Ibraahim Axmed waxa uu dhanka kale Gaadiidleyda ugu baaqay in ay dulqaataan haddii ay caqabad la kulmaan inta lagu guda jiro maalmaha ciiddul Adxaa oo ammaanka aad loo adkeynayo.
Askarta ayuu ugu baaqay in ay ka feejignaadaan waxyeelo ay gaarsiiyaan dadka shacabka, isla markaana ay adeegsadaan aqlaaqda iyo la dhaqanka lagu soo tababaray kolkii ay ku biirayeen Ciidamada.
Ciidamada ammaanka Magaalada Baydhabo Xarunta KMG ah ee Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed ayaa maanta muddo kooban xannibay isu socodka Gaadiidka, sabab la xiriirta oogista Salaadda, markii dambe waa ay fureen waddooyinkii ay xireen.